Toos u daawo:-Khudbadaha musharaxiinta Guddoonka Baarlamaanka Galmudug - Awdinle Online
Toos u daawo:-Khudbadaha musharaxiinta Guddoonka Baarlamaanka Galmudug
January 16, 2020 (Awdinle Online) –Magaalada Dhuusamareeb Caasimadda Galmudug waxaa ka bilaawdey dhageysiga khudbadaha musharaxiinta u tartameysa Guddoonka Baarlamanka Labaad ee maamulka Galmudug.
Arbacadii shalay ayaa la xiray qabashada Araajida musharaxiinta ,waxaama Musharixiinta is diiwaangeliyey ee ku tartami doona xilka guddoonka Baarlamaanka Galmudug oo gaaraya 7 Xubnood,kuwaas oo maanta guda galey jeedinta khudbadahooda musharaxnimo.
Sidoo kale Guddoomiye kuxigeenka 1aad iyo 2aad ee Baarlamaanka Galmudug ayaa waxaa u taagan Afar Musharax oo uu kamid yihiin Faadumo Cabdi Faandhe & guddoomiye kuxigeenkii hore ee labaad Maxamed Sheekh Axmed Maalin.
Berrito ayaa lagu wadaa in ay dhacdo doorashada Guddoonka Baarlamanka Labaad ee Galmudug, waxaana intaasi kadib loo gudbidoono doorashada Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Galmudug.
HADALJEEDINTA MUSHARRAXIINTA GUDDOONKA2AAD EE BARLAMAANKA GALMUDUG
Posted by Telefishinka Qaranka Soomaaliyeed on Thursday, January 16, 2020
Previous articleOdayaal dhaqameed ku xirnaa Boosaaso oo la sii daayey
Next articleAqalka Sare oo dib u soo celiyay Sharci ay ansixiyeen Golaha Shacabka